व्यायाम गर्दा यस्ता कुरामा ध्यान दिनुस् ! | Suvadin !
Nov 22, 2019 07:06
एजेन्सी । नियमित व्यायाम गरेर वा खेल खेलेर शरीरलाई स्वस्थ, फुर्तिलो र सुन्दर बनाउन सकिन्छ । रोगको प्रभाव कम गर्न सकिन्छ । रगत शुद्धीकरण र रक्तचाप सन्तुलनमा राख्न व्यायाम महत्वपूर्ण सावित हुन्छ । हाड, जोर्नी र पाचन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन पनि यसको भूमिका रहन्छ । नियमित व्यायाम गर्नेले यी ३ कुरामा भने विशेष ध्यान पु-याउनुपर्ने हुन्छ ।
खाली पेटमा व्यायाम गर्नुहुँदैन । त्यस्तै, खाना खानेबित्तिकै पनि हुँदैन । व्यायाम गर्नुभन्दा एक घन्टाअघि काब्रोहाइड्रेट, प्रोटिन, क्याल्सियमयुक्त खानेकुरा खानु राम्रो हुन्छ । चना, दूध, अन्डा, ओट्स, ब्राउनब्रेड, बदाम, काजु, किसमिस, ओखर, फलफूल आदिले शरीरको प्राकृतिक शक्ति र दिमागको कन्सन्टेर्«ट पावर बढाउन भूमिका खेल्छन् । व्यायामपछि पनि प्रोट्रिनयुक्त खानेकुरा वा प्रोट्रिन सेक लिनुपर्छ । नियमित व्यायाम गर्ने व्यक्तिले बिहानदेखि बेलुकासम्म तीन घन्टाको फरकमा दिनको ६ पटक प्रोटिनयुक्त खानेकुरा खाँदा राम्रो हुन्छ ।
प्रशिक्षकको प्रत्यक्ष निगरानीमा व्यायाम गर्नु राम्रो हुन्छ । शरीरलाई वार्मअप र स्ट्रेचिङ नगरी अभ्यास गर्दा मांसपेशी फाट्ने समस्या देखिन सक्छ । आफ्नो शरीरको तौलअनुसार कार्डियो, जम्पिङ, फास्ट ट्रयाक अभ्यास, हेभी जिम, लाइट जिम आदि गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रशिक्षकको निगरानीमा अभ्यास गर्दा यी कुरा बुझ्न सहज हुन्छ । प्रशिक्षकको सल्लाहले डाइट प्लान तयार गर्न पनि सहज हुन्छ । ज्यान घटाउने वा बढाउने भन्दैमा मनपरी तरिकाले अभ्यास गर्नु राम्रो होइन । कुन अभ्यास गर्दा कस्तो पोजिसनमा बस्ने, कतिवेला सास तान्ने र छाड्ने भन्ने जानकारी हुनुपर्छ । गलत तरिकाले अभ्यास गर्दा ढाड सड्किने, हातका जोर्नी र कुम दुख्ने, घुँडा दुख्ने, शरीर बिग्रने आदि समस्या देखिन सक्छन् ।
३. समयसीमा निर्धारण
निश्चित समयसीमा निर्धारण गरेर सधैँ उही समयमा अभ्यास गर्दा राम्रो नतिजा निस्कन्छ । हामीले दैनिक एकदेखि दुई घन्टासम्म कुनै पनि शारीरिक अभ्यास गर्न सक्छौँ । दैनिक ३० मिनेट टे«ेडमिलमा वाकिङ गर्ने, १० देखि १५ मिनेट स्ट्रेचिङ गर्ने, शरीरका सम्पूर्ण माशंपेशीको मिक्स कार्यक्रम ( कक्टेल प्रोग्राम) गर्दा राम्रो हुन्छ । जिमका सबै प्रोग्राम गर्नुपर्छ भन्ने होइन । हल्का अभ्यास गरेर पनि शरीरलाई स्वस्थ र सुन्दर राख्न सकिन्छ । तर, नियमित रूपमा भने गर्नुपर्छ ।
वीर अस्पतालमा उपचाररत दुई जनाको मृत्यु, कोरोना आशंका, रिपोर्ट आउन बाँक...
विश्वयुद्धकी साक्षी १ सय ८ वर्षीया बृद्धाको कोरोनाले लियो ज्यान
बुटवलको आइसोलेसनमा मृत्यु भएका युवकको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ
अष्ट्रेलियामा ८ नेपालीमा देखियो कोरोना संक्रमण
अमेरिकामा कोभिड–१९ बाट दुई लाख मानिसको मृत्यु हुने चेतावनी, ट्रम्प ‘सज...
कोरोना संक्रमणबाट अमेरिकामा एक पत्रकारको मृत्यु
मस्कोमा आजदेखि 'क्‍वारेन्टाइन'
अमेरिकामा ३ सय बढी नेपाली कोरोना संक्रमित !